ကျနော့်အဘွား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျနော့်အဘွား
Posted by phone_kyaw on Mar 23, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
သား…အဘွားကို သတိရသေးလားတဲ့။ နင်တို့ ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲလို့ မေးတယ်။
ဒါနဲ့ ကျနော်က…အဘွားမသေနဲ့ အုံး။ ကျနော်တို့ ပြန်လာရင် အဘွားနဲ့ တွေ့ ချင်သေးတယ်။ ဘုရားတွေလိုက်ပို့ ချင်တယ်လို့ ပြောတော့…..
တနေ့ က အဘွားဆုံးတော့ အမနဲ့ အဖေက ဒေါ်ဥမ္မာရီဆီကို လှမ်းပြီးအကြောင်းတယ်။ အဘွားရဲ့ သမီးအရင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဥမ္မာရီက ဘာပြောလဲဆိုတော့….
ကျနော့်အမကို…ငါ့အိမ်ကို လာခဲ့။ ပိုက်ဆံလာယူတဲ့ဗျာ။
ကျမ မအားဘူး….လို့ ပြောလိုက်တယ်။
သြော်…လောကမှာ ဒီလိုသားသမီးတွေရှိပါလားလို့ တွေးနေမိပါတော့တယ်။
ကျွန်တော့မှာတော့ အဖွားတွေ အဖိုးတွေ မရှိကြတော့ပါဘူး
ရှိတုံးကလည်း ကိုယ်တိုင်ကငယ်သေးတော့ လုပ်မကျွေးလိုက်ရပါဘူး..
ရှိနေသေးတဲ့ အဖေနဲ့အမေကိုဘဲ တတ်စွမ်းသရွေ့ထောက်ပံ့
အဲလိုမျိုးစိုးတဲ့သားသ္မီးတွေ လူ့လောကမှာရှိနေသေးတာမှ အများကြီးပါဘဲ တော်တော်စိုးတဲ့သားသ္မီးတွေလည်းလူလောကမှာရှိနေပါသေးတယ်
ကောင်းတော့ကောင်းတယ်။ သူဟာသူကျေးဇူးမသိတတ်တာ ဒီလိုတည့်တည့်ကြီးရေးလိုက်တော့ ကိုဖုန်းကျော်ကို ကမ္ဘာမကျေဖြစ်နေမှာပေ့ါ။
ဒီလို အဆင်မပြေတဲ့ဘ၀ထဲက ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့လို့ ကိုဘုန်းကျော်ကို တကယ်ချီးကျူးပါတယ်။ မြေးတွေကို မတွေ့ဘဲ ဆုံးသွားရတဲ့ အဘွားကိုလဲ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဘုန်းကျော်ဘက်က တာဝန်ကျေအောင် နေခဲ့တာပဲလေ..။
တစ်ချို့ က အပြောဆိုးပေမဲ့ စိတ်ရင်းဖြူတယ်။
ကိုဘုန်းကျော် ကြည့်ရတာ (ဒီဇာတ်လမ်း က အမှန် ကို ရေးတာ ဆိုရင် ;-) ) အဲဒီလို လူမျိုး။
ပါးစပ်က ဆူပူဆဲဆိုပြီး ကိုယ်က စေတနာ နဲ့အငတ်ခံ ကျွေး မဲ့ သူမျိုး။
ဒါကြောင့်လဲ အဲဒီ စိတ်စေတနာ ကအကျိုးပေးပြီး အော်ဇီ မှာ အလုပ်အကိုင်နဲ့ တင့်တင့် တယ်တယ် နေနေနိုင် တာလို့ ထင်ပါတယ်။
အဲလိုမျိုး မှန်ခဲ့ရင် အဲဒီစိတ်စေတနာလေးကို ဆက်ထိန်းသွားပါ ကိုဘုန်းကျော် ရေ။
အဘွား မဆုံးခင် မတွေ့လိုက်နိုင်တာကတော့ ကိုဘုန်းကျော် တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
နိုင်ငံ အပြင်ရောက် နေသူတိုင်း အဲလို ဝမ်းနည်းစရာ အဖြစ်တွေ ရှိကြပါတယ်။ :-(
အဘွားကို မသေခင် လုပ်ကျွေးတာ၊ တယ်လီဖုန်း စကားပြောခွင့် ရတာတွေ နဲ့ စိတ်ကိုဖြေပါ။
အဲဒီပအို့ ဝ်ရွာကလူတွေနဲ့ အရမ်းကိုခင်မင်ရင်းနှီးကြခါအပြန်အလှန်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြဘူးပါတယ်..
ကျနော့်ရေးတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါတွေကို ကျနော်ခံစားလာခဲ့တာ အတော်ကြာပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘ၀ကိုလည်း တစ်ခါတစ်လေ လွမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်တယ်။ အခုလို ဖေးဖေးမမ ကွန်းမန့် ပေးတော့လည်း ကြည်နှုးမိပြန်တယ်။ လောကမှာ အရေးကြီးဆုံးက ပျော်ရွှင်မှု့ ၊ နွေးထွေးမှုနဲ့ ဖြူစင်တဲ့သံယောဇဉ်တွေပဲ။ ငွေတွေ၊ ရာထူးတွေဆိုတာ ကိုယ်သေသွားရင် သင်္ချိုင်းထဲကိုတောင် ယူသွားလို့ မရတဲ့အတွက် တချို့ သောလူတွေကို သတိရစေချင်လို့ ပါ။ မြန်မာပြည်က လူတစ်ချိူ့ ချမ်းသာတာ၊ ပညာတက်တာ၊ ရာထူးကြီးတာကို သြစတျေးလျနိုင်ငံက လူတွေက ထိုင်ပြီး ရီနေပါတယ်။
ဒီလို အတွေးရှိတယ် ဆိုရင် တုံတုံတို့၊ ဆူးတို့၊ မမတို့ ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးမပါဘဲ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်က အားနည်းသူ တွေ အတွက် ပျော်ရွှင်မှု့ ၊ နွေးထွေးမှုနဲ့ ဖြူစင်တဲ့သံယောဇဉ် တွေ ပေးဖို့ အတွက် သူတို့ နဲ့ အတူ အစ်မတို့ အားလုံး ပါဝင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစား ပေးနေတာကို မြင်နိုင်ကောင်း ပြီ ထင်ပါရဲ့။ :-)
သြစတျေးလျနိုင်ငံက လူတွေက တချိန်လုံး ရီ နေ တော့ ဘာလုပ်စား ကြတုန်း …. သူတို့ က လူတချို့ ချမ်းသာတာ၊ ပညာတတ်တာ၊ ရာထူးကြီးတာကို ဘာလို့ ထိုင်ရီ ကြတာလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တော့ ……. မနာလို တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ “ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ action မျိုးကို ပြုတာဟာ … စိတ်ထဲမှာ ကြိက်ပြီး ကြောက်နေ၊ မနာလိုနေ၊ မလုံခြုံ နေ” လို့ ….. ပဲ .. ထင်ပါတယ်လေ။
အသက်နဲ့ လိုက်တဲ့ အလေးချိန် ရှိကြပါစေဗျာ …။
ကျွန်တော် ကတော့ကိုဘုန်းကျော် ၀က်ဆိုက် ကိုလဲ သွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ် အရသာစုံ ပေါ့ အချို့ ပို့ လေးတွေ က ကောင်းပါတယ် အချို့ ပို့ လေးတွေ ကျော်ဖတ်ပါတယ် ဒုတ်နဲ့ ရိုက်ချင်လို့တချို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပို့ လေးတွေ ကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ကွန့် မန့်တေ့တင်ရဲဘူးဗျာ ကိုယ်ပါ ဆဲခံနေ၇မှာဆိုးလို့စာမျိုးစုံ အဆဲနည်းနည်း ရေးခြင်းဖြင့် ပျော်၇ွှင်ပါစေဗျာ
လူသားမှန်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ချစ်ခင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့
မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို နှစ်သက်မိပါတယ်။
အဘွားကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးခဲ့တဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။
လောကကြီးက မှန်လိုပါပဲ၊ကိုယ်က ပြုံးပြရင် သူ့ အပြုံးကိုလည်းရမှာပါ။